အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် India International Mega Trade Fair ပြပွဲများ | Trade Promotion
Home / News / အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် India International Mega Trade Fair ပြပွဲများ
Wed, 04/04/2018 - 20:43 -- tduser
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ၊ ပြပွဲ ကျင်းပရေးကော်မတီမှ တာဝန်ယူကြီးမှူးကျင်းပမည့် India International Mega Trade Fair (IIMTF) ပြပွဲများကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Delhi-NCR, Kolkata, Bhubaneswar & Visakhapatnam မြို့ကြီး (၄) မြို့တို့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ IIMTF ပြပွဲများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးဆောင် ကျင်းပသောပြပွဲများဖြစ်ပြီး ပြပွဲကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကုန်သွယ်မှုနှင့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။
India International Mega Trade Fair (IIMTF) ပြပွဲကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Kolkata မြို့တွင် ယခင်နှစ်က နိုင်ငံပေါင်း (၁၇) နိုင်ငံ၊ ပြည်နယ် (၁၉) ခုတို့မှ လာရောက်ပြသပြီး လည်ပတ်သူ (၁၀,၀၀,၀၀၀) ခန့်ရှိကြောင်း၊ Bhubaneswar မြို့တွင် လာရောက် လည်ပတ်သူ (၈၇၀,၀၀၀) ခန့် ရှိကြောင်း၊ Visakhapatnam မြို့တွင် လာရောက် လည်ပတ်သူ (၇၅၀,၀၀၀) ခန့် ရှိခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တို့တွင် ကျင်းပမည့် အဆိုပါပြပွဲများ၏ ပြခန်းအကျယ်အဝန်း၊ ကျင်းပမည့်နေရာ/ ရက်စွဲနှင့် ပြခန်းနှုန်းထားများကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်-
Mega Trade Fair (IIMTF)
India Expo Centre & Mart, Greater Noida Expressway, Delhi-NCR
17th to 27th August, 2018
(9 Sq. Mt.)
US $. 2,000
Science City , Kolkata,
14th to 25th
US $. 1,700
US $. 1,300
A.U Engineering Ground,
အထက်ပါပြပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ သွားရောက်ပြသမည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များအနေဖြင့် ပြပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Marketing Office: - G. S. Marketing Associates, 108/9, Monohar Pukur Road. Kolkata – 700 026. Fax: 033-2465-9754. Mr. Prakash Shah’s Mobile No. +91-9830331010, email:prakash.bengalchamber@ gmail.com နှင့် Mr. Utpal Roy’s mobile No. +91 7003178250/9433012988/ 9830080180 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်းနှင့် မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၊ နေပြည်တော်ဖုန်း၊ ၀၆၇-၄၃၀၁၂၈၊ ၀၆၇-၄၃၀၄၄၇၊ Email: moctradefair@gmail.com ၊ ရန်ကုန် ဖုန်း၊ ၀၁-၂၅၄၀၂၄၊ Email: itpic.moc@gmail.com နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်သို့ လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Prev: နေ့စဉ်ဈေးကွက်သတင်း(အတို)(၂.၄.၂၀၁၈) Next: Rice Weekly(4.4.2018)